एग डोनेसनबाट बच्चा जन्माउने बढ्दै | Hamro Doctor News
एग डोनेसनबाट बच्चा जन्माउने बढ्दै
टेष्टट्युब बेबी वा आइभीएफमार्फत बच्चा जन्माउँदा, बच्चा जन्माउनयोग्य महिलाले अण्डा दिनु नै एग डोनेशन वा अण्डा दान हो । विशेषगरी बच्चा जन्माउने चाहना भएका तर आवश्यक अण्डा उत्पादन नभएका निःसन्तान महिलाका लागि यस्ता अण्डा आवश्यक हुन्छ ।
यसरी गरिन्छ एग डोनेशन
जब कुनै महिलाले आइभीएफ वा टेस्टट्युब बेबीमार्फत शिशु जन्माउन चाहान्छिन् । उसलाई अण्डादान गर्न तयार महिलाको स्वास्थ परीक्षण गरिन्छ । उनको स्वास्थ्य अवस्था कस्तो छ ? अण्डा कतिको योग्य छ ? अण्डा लिने र दिने दुबैको शारीरिक अवस्था हेरी सबै कुरा उपयुक्त भए मात्रै आवश्यक उपकरणको सहायताले अण्डा निकालिन्छ र सम्बन्धित महिलाको श्रीमानको विर्यसँग मिलाई त्यही महिलाको पाठेघरमा राखिन्छ ।
नेपालमा अझै पनि एग डोनेशनलाई नकारात्मक रुपमा लिने प्रचलन रहेको पाइन्छ । एग डोनेशन गर्ने र लिने महिला समाजमा खुल्न हिच्किचाउने गरेको पाइन्छ । एग डोनेशन गर्ने महिलाको स्वास्थ्मा असर पर्ने, पछि बच्चा नहुने र यसरी जन्मिएका बच्चा पूर्ण स्वस्थ हुँदैनन् भन्न् भ्रम समाजमा रहेको छ । तर यो गलत हो । एग डोनेशनबाट जन्मने बच्चाहरू पनि अन्य समान्य जस्तैं हुन्छन् । स्वास्थ परीक्षण पश्चात उपयुक्त भए मात्र यस्तो अण्डा दिने र लिने भएकाले यसले कुनै असर गर्दैन् ।
नेपालमा एग डोनेशन बढ्दो
विकसित राष्ट्रहरूमा एग डोनेशन निकै पहिलेदेखि प्रचलनमा छ । नेपालमा भने यसले भर्खरै चर्चा पाउन थालेको छ । यो निकै राम्रो कुरा हो । आफ्नो स्वास्थ्यका कारण बच्चा जन्माउन नसकेका महिलाले कसैको अण्डा लिएर बच्चा जन्माउन सक्छिन । अण्डा दिनेलाई पनि आर्थिक लगायत अन्य कुरामा सहयोग पुग्छ । एग डोनेशन गर्ने धेरैजसो कलेजका किशोरीहरू रहेको पाइन्छ ।
एक महिलाले कति पटकसम्म एग डोनेशन गर्न सक्छिन्
एउटा स्वस्थ महिलाले स्वस्थ परीक्षण गर्दा उपयुक्त ठहरिए चारदेखि ६ महिनाको अन्तरमा जीवनभरमा ४ देखि ६ पटकसम्म एग डोनेशन गर्न सक्छिन् । छोटोछोटो समयमा धेरै पटक यस्तो गर्नु भने राम्रो हँुदैन् ।
कत्ति पैसा लाग्छ
एग डोनेशन गर्दा डोनर अनुसार पैसा फरक पर्छ होल । यो हामीसँग सम्बन्धित हुँदैन । यो अण्डा दान दिने र लिनेबीच हुने कुरा हो ।
Last modified on 2019-05-02 06:31:20